Ndị njem nọ na Royal Vaccinated Royal Caribbean Cruise Test dị mma maka COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Ndị njem nọ na Royal Vaccinated Royal Caribbean Cruise Test dị mma maka COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ndị okenye anọ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na ụmụaka abụọ a na-agbabeghị ọgwụ na-enyocha ihe dị mma maka COVID-19 onboard Royal Caribbean Adventure of the Seas.
Njem njem isii nke Oké Osimiri na -enyocha ihe dị mma maka coronavirus.
Achọpụtara ikpe isii ka enyere ndị njem nyocha ngwa ngwa.
A ga -ebupụ ndị njem bu ọrịa n'ụgbọ ahụ wee felata laa.
Caribbeantù Royal Caribbean kwupụtara taa na ndị njem isii nọ n'ụgbọ mmiri Royal Caribbean International's Adventure of the Seas nwalere ihe dị mma maka COVID-19 n'oge ule njem ụgbọ mmiri.
Ndị okenye anọ a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ndị na -eme njem iche iche nwalere ihe ọma yana ụmụaka abụọ a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa ndị nọ n'otu oriri ahụ. N'ime ndị njem nyochara nke ọma, mmadụ atọ n'ime ndị okenye ahụ bụ asymptomatic, dịkwa ka ụmụaka abụọ ahụ, ebe otu n'ime ndị okenye nwere mgbaàmà dị nro.
Onye na-ekwuchitere Royal Caribbean Lyan Sierra-Caro kwuru na nnwale dị mma bụ akụkụ nke ule a na-eme na ngwụcha njem ahụ ka ndị njem wee wepụta ihe akaebe nke ule adịghị mma chọrọ ịlaghachi n'ụlọ.
Achọpụtara ikpe isii mgbe enyere ndị njem nlele ngwa ngwa, nyocha PCR na-esote gosipụtara na ha dị mma maka nje COVID-19.
Mgbe ha nwesịrị nyocha nke ọma maka COVID-19, a kpọpụrụ ndị ọbịa butere ya na nnọkọ njem ha na ndị niile nọ nso na-achọpụta ma nwalee ihe ọjọọ, ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
Royal Caribbean kwuru na a ga -ebupụ ndị njem isii ahụ n'ụgbọ ahụ n'ụgbọ ahụike wee jiri ụgbọ elu nke onwe ha laa n'ụlọ ha.
A na -akwụsị ụgbọ mmiri ugbu a na Freeport, na Bahamas.
Njem njem nke Oké Osimiri, nke si na Nassau na Bahamas na -ebugharị na July 24, chọrọ ka ndị njem niile dị afọ 16 ma ọ bụ karịa nweta ọgwụ mgbochi zuru oke ma nwalee ihe ọjọọ tupu ha abanye. Ndị na -erughị eru maka ọgwụ mgbochi ahụ kwesịrị igosi nsonaazụ ule adịghị mma maka njem.
Dee Brummett ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 13, 2021 na 06:08
Kedu ụdị nsogbu mmadụ kwesịrị inwe ka o tozuo maka enweghị ogbugba ahụ?